१ चम्चा बेकि powder पाउडर बदल्न कति सोडा लिन्छ? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
बेकिंग पाउडरको चम्मचको साथमा 1 लाई बदल्न म कति सोडा गर्छु?
बेकिंग सोडा जहिले पनि बेकिंग पाउडरमा परिवर्तन नगर्नुहोस्। उदाहरणको लागि, यदि एमडी परीक्षणमा उपस्थित छ, तब सोडा आवश्यक पर्दछ।
अन्य अवस्थामा, बेकिंग सोडा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
मेरो अनुभवमा आधारित:
- यदि बेकि powder पाउडर १ चम्मचबाट २ सम्म छ भने सोडालाई ०. te चम्मच चाहिन्छ;
- यदि बेकि powder पाउडर १ घन्टा चम्चा भन्दा कम छ भने, सोडा पकाउने पाउडरको आधा मात्रा लिनु पर्छ।
र तदनुसार, यसको विपरित:
- यदि रेसिपीमा सोडा ०. t टिस्पी हो भने बेकिंग पाउडरलाई करीव १. t चम्मच चाहिन्छ।
बेकिंग पाउडर, उही सोडा - मुख्य रूपमा यो र बेकिंग पाउडरको संरचनाबाट। म सामान्यतया १ चम्चा प्रयोग गर्दछु। सोडा, १ चम्मच निगलियो। एसिड (कागती, वा एस्कोर्बिक - पाउडरमा) शार्लोट, वा पेनकेक्सको लागि आटा बढाउनको लागि पर्याप्त छ
सोडा १ चम्मच भन्दा बढि हुनु हुँदैन र सिरकाको साथ शान्त हुनु पर्छ। र यी बेकि powder पाउडरलाई अन्जीर दिनुहुन्छ? सबै भन्दा राम्रो मामलामा, समान सोडा, र हुनसक्छ रसायनशास्त्र।
तर म बेकि powder पाउडर सबै नै प्रयोग गर्दिन - म कुनै कारणका लागि विश्वास गर्दिन। र हुन सक्छ म यसलाई पौष्टिक पूरक पदार्थहरूसँग जोड्दछु, जुन खानेकुरामा सम्भव भएमा बेवास्ता गर्न प्रयास गर्छु। गर्लफ्रेंडको सल्लाहबाट मैले पत्ता लगाए कि सोडाको सम्बन्धमा बेकिंग पाउडर लगभग to देखि १ अनुपातमा बढी लिनुपर्दछ। शुभकामना!
०.as चम्मच र एक चम्चा।
दुर्भाग्यवस, सोडा बेकि powder पाउडर होईन र इनिता बाहेक कहिँ पनि प्रयोग गरिदैन। तपाईं सोडाबाट एक "बेकिंग पाउडर" पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, लेबल पढ्नुहोस्।
त्यहाँ "अमोनियम कार्बोनेट" हुनुपर्छ, "सोडियम बाइकार्बोनेट" हुनुहुन्न
तात्याना, १: २ वा १: replace प्रतिस्थापन गर्नुहोस्, त्यो हो, आधा वा स्टल सोडाको एक तिहाइ लिनुहोस् बेकिंग पाउडरको १ स्टन्टको सट्टा।
बेकिंग पाउडर सोडाको बराबर भागहरूको मिश्रण हो कागती (अथवा टार्टरिकएसिड)) प्लस संरक्षण (पीठो, स्टार्च वा धुलो चिनी लागि तटस्थ पाउडर)। त्यसैले, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफैलाई यो सबै मिश्रण र पाउडर पकाना प्राप्त गर्न सक्छन् :)
१ किलोग्राम पिठोको लागि, -1--4 चम्मच बेकि powder पाउडर वा २ चम्मच + २ चम्मच साइट्रिक एसिड खपत हुन्छ। सोडा सिरका (सिट्रिक एसिडको सट्टामा) सँग मिसाउन सकिन्छ।
यदि चीजमा अम्लीय (केफिर, दही, आदि) थपियो भने, तपाईंले सोडा बुझाउन सक्नुहुन्न - यो अम्लीय उत्पादनको साथ बुझाइनेछ।
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,441 प्रश्नहरू।